Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Sing! Karaoke by Smule v3.8.5 Latest Version ကို VIP အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း ♫
♪ Sing! Karaoke by Smule v3.8.5 Latest Version ကို VIP အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း ♫
Sing! Karaoke by Smule VIP Unlock လုပ်နည်းကို အရင်တစ်ခေါက်က Video လေးနှင့်တင်ပေးဖူးပါတယ်... Update တွေ ခဏခဏထွက်နေတာကြောင့် ပုံသေနည်းတော့မရှိနိုင်ပါဘူး.. အမြဲ ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်.. နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ သူများဖန်တီးထားတာကို မိမိက အလကားသုံးချင်တာဖြစ်လို့ အားစိုက်မှုလေးတော့လိုပါမယ်ခင်မျာ..။
Sing! Karaoke by Smule ကို VIP အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်... မိမိ Android ဖုန်းက Root ဖေါက်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..။
Sing! Karaoke by Smule Latest Version ကို Google PlayStore ကနေဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ..
Google Playstore မှ Download ဆွဲရင် Error တတ်ပြီး ဆွဲမရတာမျိုး ဖြစ်နေရင် ဒီ ApkPure ကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ... (Google Playstore နှင့်အတူတူပါပဲ ပိုကောင်းတာက Gmail ရှိစရာမလိုပါဘူး)
ပြီးရင် ApkPure App ကိုဖွင့်ပြီး အပေါ်နားက Search မှာ Sing! ရေးထည့်ပြီးရှာလိုက်ပါ။ တွေ့ရင် Install ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ..။ (ထိုနည်းအတိုင်း အခြား App တွေကိုလည်း အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်)
ပြီးရင် ဒီ Lucky Patcher ကိုလည်း ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ..။
VIP Unlock ပြုလုပ်ဖို့ Lucky Patcher App ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။
အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း တဆင့်ချင်းလုပ်သွားပါ... (ပုံအစဉ်တိုင်းလုပ်ပါ မကျော်ပါနှင့်)
Sing! App ကိုဖွင့်ကာ VIP အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..။